mardi, 01 septembre 2015 22:52
Fifandirana ara-politika : Nodorana velona ilay sefo Fokontany
Fanohanana kandida iray ho Ben’ny tanàna tao amin’ny Kaominina Bejofo - Ambatondrazaka no niteraka ny disadisa teo amin’ny sefo Fokontanin’i Bejofo sy ireo mpanao politika sasany. Niitatra hatrany amin’ny famonoana ho faty ny sefo Fokontany mianakavy ny raharaha ny alin’ny 26 aogositra teo. Notohanan’ireo olon-dratsy avy any ivelany ny varavan’ny trano, toy izany koa ny varavarankely mba tsy ho afaka mivoha. Ny lelan’afo efa niredareda no nanaitra ilay sefo Fokontany telo mianaka tao an-trano. Nezahin’ireo nopoirina ny varavarankely ka teo izy telo mianaka no nanavotra aina.
mardi, 01 septembre 2015 15:07
Fahasalamana : Miha-mahazo vahana ny aretina fiakaran’ny tosidra
Tranga iray mahasarika ny sain’ny maro eo amin’ny andavan’androm-piainana ny fandrenesana matetika olona tratry ny aretina fisondrotan’ny tosi-dra ka na mamoy ny ainy avy hatrany, na koa tapaka lalandra sy mitondra takaitra, ary ny tena mahavariana dia tsy ny olon-dehibe ihany no tratran’izany, fa hatramin’ireo tanora koa aza.
lundi, 31 août 2015 22:42
Toliara : Vao avy nigadra dia nanolana ny zana-drahalahiny indray
Lehilahy iray vao nivoaka ny fonja ny alakamisy lasa teo tany Toliara no tratra nanolana ny zazavavy tsy ampy taona, izay zana-drahalahiny ihany. Notambazany roa alina ariary ilay tovovavy iray omaly hariva teo mba hanao firaisana ara-nofo taminy saingy tsy nety.
lundi, 31 août 2015 14:32
Sprinter nipitika kodiarana : Maty ny mpamily, mpandeha 11 naratra
Fiara sprinter nitondra fianakaviana avy niala sasasatra tany Toamasina no tra-doza 4km tsy hahatongavana ao Antsampanana tokony ho tamin’ny 11 ora latsaka fahefany, raha hiazo an’Antananarivo. Nipitika teny ampandehanana ny kodiarana iray aoriana an’ilay fiara, nefa nandeha mafy, ka izay no nitarika ny loza. Nitsikasina teo amin'ny arabe ilay fiara, nitongilana any amin'ny faritra misy ny mpamily. Maty tsy tra-drano ity farany, voatsindry, naratra ny 11 tamin’ireo mpandeha tao anatiny, ka ny 2 no tena voa mafy mila fandidiana. Tsaboina ao amin'ny hopitalin'i Brickaville ireo maratra
Maresaka ny Tarimbogna andiany voalohany
vendredi, 28 août 2015 22:37
Tsenabe Tarimbogna 2015 : Afa-po ny mpikarakara
Araka ny nambaran-dRtoa Saholy avy amin’ny Mick Production dia tratra ny tanjona satria na dia vao andiany voalohany aza ny “Tarimbogna” dia nahavory olona maro tao Ambatondrazaka. Tafahoana avokoa ny zanaky ny faritra Alaotra Mangoro manerana ny Nosy. Haharitra hefarana ny foara rehefa nanomboka omaly. Rahampitso kosa no sokafana amin’ny fomba ofisialy ny “Tarimbogna 2015”.
Hery Rajaonarimampianina - Président de la Republique de Madagascar
vendredi, 28 août 2015 14:14
Fitondrana HVM, mpitari-bato vilambava
Mangataka fitoniana hatrany ny Filoha Rajaonarimampianina izay namoronany teny vaovao indray izany hoe "Pacte de non agression", izay azo lazaina hoe fifanarahana ny tsy hifandonana eo aminy sy ny mpanao politika na ny Solombavambahoaka. Ny zava-misy eny ifotony anefa dia mifanohitra amin'izay satria dia manapatra ny fahefany rehetra ny fitondrana HVM ka izay nandresy rehetra tamin'ny fifidianana ben'ny tanàna hivelan'ny HVM dia hanaovana antsonjay avokoa.
jeudi, 27 août 2015 21:28
Toliara : Mpamongady saribao voaroba 1,4 tapitrisa Ariary
Vola saika hividianana saribao any avaratry Toliara no lasan’ny jiolahy. Teny an-dalana ilay mpandraharaha no niharan’ny fandrobana. Nitondra mpandeha toy ny mahazatra ny fiarabe nentiny. Teo amin'ny 7 km miala ny tanànan’i Toliara, amin’ny tanàna atao hoe : Belalanda, dia nisy olona dimy toy ny mpandeha rehetra nanakana ilay fiara. Nentina fa mba vola hanampiana ny vidin-tsolika hono.
mercredi, 26 août 2015 09:48
Fiangonan'i Jesoa Kristy ho an'ny olomasin'ny andro farany
Hisy varavarana misokatra izay mahakasika ny momban'ny Fiangonan'i Jesoa Kristy ho an'ny olomasin'ny andro farany ny 29 aogositra ho avy izao.Fotoana hanokanana ireo Fiangonana vaovao, izay hanomboka amin'ny 8 ora maraina ka hatramin'ny 4 ora hariva ary hanasana ny olona rehetra.
lundi, 24 août 2015 15:34
FI.VA.ZA: Zaikabe fahadimy tany Antsiranana
Sary fahatsiarovana nandritra ny Carnaval fanokafana ny ZAIKABE tany Antsiranana. Ramatoa vadin'i Jeneraly Sekreteram-panjakana miadidy ny Zandarimariam-Pirenena, tamin'ny kabary fanokafana, dihy sy ny fanolorana loka tamin'ny fifaninana Basket-Ball. CLIQUER SUR GALERIE D'IMAGES
lundi, 24 août 2015 14:36
Noheverina ho mpangala-jaza, saika matin’ny fitsaram-bahoaka ilay lehilahy marary saina
Tonga dia nobedainy sady nentiny nandeha ity ankizivavy iray dimy taona sendra nilalao teo an-tokontany androany, tokony ho tamin’ny 11 ora sy 15 minitra, tao Mahavatse Toliara. Nihiaka mafy sady nitomany ilay zaza ka io no nanaitra ny manodidina sy ny reniny tao an-trano. Raikitra avy hatrany ny antsoantso hoe : mpangala-jaza. Rehefa nifanenjehana dia tratra. Nanohitra ireo nisambotra azy ary saika niharan’ny fitsaram-bahoaka. Nisy olona nahafantatra ilay lehilahy, ary nilaza tamin’ny fokonolona fa mivika noho ny fifohana rongony io. Fanaony ny mibeda ankizivavy mitovitovy taona tamin’ny zanany maty.
Page 209 sur 213